Dowladda Nayjeeriya oo u yeertay Ergayga Mareykanka si uu uga ... | Universal Somali TV
Dowladda Nayjeeriya oo u yeertay Ergayga Mareykanka si uu uga jawaabo hadaladii aflagaadada ee madaxwayne Trump oo ku saabsanaa dalalka Afrika.
Dowladda Nayjeeriya ayaa u yeertay safiirka Maraykanka si uu sharaxaad uga bixiyo hadal la sheegay in Todobaadkii aanu soo dhaafnay ka soo yeeray madaxwayne Donald Trump kaas oo ku saabsan dalalka Afrika.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Nigeria Geoffrey Onyeama ayaa Isniintii xaqiijiyay in Safiirka Mareykanka Stuart Symington looga yeeray xafiiska Wasaaradda Arrimaha Dibadda. balse ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin dheeri ah.
Trump ayaa su'aalay sababta ay Maraykanku u qaadanayaan muhaajiriinta Haiti iyo dalalka Afrika, oo uu ugu yeeray dalalkaasi "shithole countries", dalal uraya, sida ay sheegeen saraakiisha dawladda Maraykanka ee goob joog ka ahaa kulankii uu Trump hadlkaas uga dhawaajiyay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Nigeria ayaa sheegtay in ay doonayso"ay raadiso caddaynta ama wax kale oo ka mid ah waxyaabaha laga hadlay, iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in haddii ay run tahay hadalka Trump, ay taasi si weyn u dhaawacayso dareenka dadka, iyo in aan la aqbali karin."
Trump ayaa beeniyay hadaladaasi ku saabsan wadamada Afrika; Si kastaba ha ahaatee, dhowr sharci-dajiye oo Maraykanka ah oo ka soo qayb-galay kulanka Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha uu sameeyay hadaladaasi aflagaadada ah.
Koox ka kooban 55 dal oo Afrikaan ah ayaa dalbaday "inuu ka laabto oo uu raali galin" ka bixiyo Trump hadaladaasi.
Kan-xigaKooxaha xuquuqda oo ugu baaqay ra&#03...
Kan-horeWadaad Caan ka ah dalka Kenya oo maa...
41,764,808 unique visits